GOOGLE PLAY တွင်တစ်ဦးငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို - MARKET က PLAY - 2019
Google Play စတိုးမှာဖယ်ရှားခြင်းငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း
မကြာခဏဆိုသလိုအင်တာနက်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ကြော်ငြာခြင်းအများအပြားသည်အသုံးပြုသူများ annoys သူတို့ကိုအချို့သောအီတတ်၏။ ဤသည်အထူးသဖြင့်နှောင့်အယှက်ကြော်ငြာခြင်းသက်ဆိုင်: မေးခွန်းထုတ်စရာအကြောင်းအရာနှင့်တူသောနှင့်အတူပုံများ, Pop-ups မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်။ သို့သော်ဤ combated နိုင်ပါသည်, ဤဆောင်းပါးအတွက်ကျနော်တို့ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသင်ယူပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျထို site ပေါ်တွင်ကြော်ငြာနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်ဆိုပါကဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကို Web browser ရဲ့ standard feature များ, Third-party add-ons တွေကိုအစီအစဉ်များ၏ installation နှင့်အသုံးပြုမှု: ကျွန်တော်တို့ကိုကြော်ငြာဖယ်ရှားပစ်ရအနည်းငယ်ရွေးချယ်စရာဆန်းစစ်ကြပါစို့။
Method ကို 1: built-in features တွေ
အားသာချက်ကိုသင်ရိုးရှင်းစွာပြုလုပ် activate လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်, browser ကိုပြီးသားလူတယောက်သော့ခတ်ပေးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Google Chrome ကိုအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပါအဝငျ။
စတင်ဖို့, အဖွင့်လှစ် "Settings" ကို.
စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်တဲ့ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ် "အဆင့်မြင့် Settings" ကို ထိုသို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ကော်လံအတွက် "ကိုယ်ပိုင်ဒေတာ" ဖွင့်လှစ် "အကြောင်းအရာက Settings".
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, ပစ္စည်းမှစာရင်း scroll "ပေါ့ပ်-ups"။ ထိုအခါစစ်ဆေးမှုများကို item ကိုသတ်မှတ် "Block ကို Pop-ups" နှင့် klatsat "ပြီးပြီ".
Method ကို 2: ဒီနေရာမှာ Adblock Plus ကို plug
အဆိုပါနည်းလမ်းကိုသင်ဒီနေရာမှာ Adblock Plus ကို install လုပ်ပြီးနောက်, လူအပေါင်းတို့သည်နှောင့်အယှက်ကြော်ငြာခြင်း element တွေကိုရပ်ပါလိမ့်မယ် lock ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတွက်ပါဝင်ပါသည်။ ရဲ့က Mozilla Firefox ကိုဥပမာထဲမှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်။
ဒီနေရာမှာ Adblock Plus ကိုအခမဲ့ Download
ကျနော်တို့ဒီနေရာမှာ Adblock Plus ကို plugin ကိုမပါဘဲ site ပေါ်တွင်ဖြစ်သောကြော်ငြာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုက် "get-tune.cc" ဖွင့်လှစ်။ ကျနော်တို့စာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ကနေကြော်ငြာ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကိုကြည့်ပါ။ အခုတော့ uberom ။
browser ကိုဖွင့်လှစ်အတွက် extension များတပ်ဆင်ရန် "Menu ကို" နှင့်စာနယ်ဇင်း "ထို့အပြင်".
ပစ္စည်းရှာနေသင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ Right "Extensions" နှင့်ရှာဖွေရေးအကွက်တွင်, ဖြည့်စွက်ထည့်သွင်း "ဒီနေရာမှာ Adblock Plus ကို".
သည်အတိုင်း, အလွန်ပထမဦးဆုံး plugin ကို download လုပ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုမြင်နိုင်ပါသည် - ဤသင်လိုအပ်အရာဖြစ်တယ်။ စာနယ်ဇင်းများ "Install".
Plug-in ကိုအိုင်ကွန် browser ၏အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ယခုဤကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်းများပါဝင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
အခုဆိုရင်ကျနော်တို့ကကြော်ငြာသွားကြောင်းရှိမရှိစစ်ဆေးဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာ "get-tune.cc" ကို update နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ site ပေါ်တွင်အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာရှိကွောငျးထငျရှားပါသညျ။
Method ကို 3: blocker Adguard
Adguard ဒီနေရာမှာ Adblock ထက်ကွဲပြားခြားနားသောနိယာမအပေါ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဒါဟာမဟုတ်ဘဲရုံက၎င်း၏ display ကိုရပ်တန့်နေသည်ထက်, ကြော်ငြာဖယ်ရှားပေးပါသည်။
အခမဲ့ Adguard Download
ဒါ့အပြင် Adguard စနစ် load ပါဘူးအလွယ်တကူ install လုပ်ပြီးသား။ ကြှနျုပျတို့၏ website တွင်လူကြိုက်အများဆုံး browser များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အစီအစဉ်ကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့် configure ဘယ်လိုအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ရှိပါတယ်:
Mozilla က Firefox မှာ Adguard ပြင်ဆင်မှုအား
Google က Chrome မှာ Adguard Installing
Opera မှာ Adguard Installing
Yandex Browser ကိုအတွက် Adguard Installing
Adguard program ကို install လုပ်ပြီးနောက်ကချက်ချင်း browser မှာတက်ကြွစွာဖြစ်လာသည်။ ယင်း၏အသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်။
ကျနော်တို့ဥပမာ, ဆိုက် "get-tune.cc" ထုတ်ဖော်, program ကိုဖယ်ရှားပြီးကြော်ငြာသည်မည်မျှတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့် Adguard ပြီးနောက်မတိုင်မီစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဘာကိုနှိုင်းယှဉ်ကြကုန်အံ့။
အခုတော့အောက်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာဆိုက်တစ်ခုချင်းစီစာမျက်နှာပေါ်တွင် icon ကို Adguard ပါလိမ့်မယ်။ သင်ဤ blocker ကို configure ဖို့လိုအပ်လျှင်, သင်ရုံ icon ကို click ပါဖို့လိုပါတယ်။
ကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက်အပိုဆောင်း tools များ
အဆိုပါဖြေရှင်းချက်အားလုံးသည်သင်၏ဝဘ်-surfing ဖို့ browser ကိုအတွက်ကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: What to do if Google play store is not working in your android device (စက်တင်ဘာလ 2019).